Madaxwayne Muuse ,Tijaabo siyaasadeed maanta ugu horaysa.
(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 16:20:20
Madaxwayne kastaa markuu talada yimaado , wuxuu maraa tijaabo siyaasadeed , taasoo natiijada uu ka keenaa ay noqoto sawirka waayihiisa danbe siday u eekaanayaan .
Tusaale , Madaxwayne Riyaale markuu talada qabtay 2003 , wuxuu dhaxlay muran siyaasadeed , doorasho lagu qaybsamay iyo itaal dari dawladeed , intaana waxa usii dheeraa mucaarid xoogan aadna u habaysan.
sanadii 2005 labadii aqal ee Baarlamaanku waxay cod wayn oo aqlabiyada ku ansixiyeen in doorashada horteed la sameeyo diiwaan gelin , si dadka loo tira koobo , ka dibna kuraasida lagu qaybiyo .
Saamiga kuraasida laguma heshiis ahayn , bulshada iyo axsaabtuna doorasho ayay rabtay ,
goleyaashina xeer doorashooyinka dib u dhigaya ayay ansixiyeen .
Mr riyaale intaas oo caqabadoodba intuu ka dul talaabsaday ayuu doorashadii baarlamaanka qabtay isla sanadii 2005 , tajaabadaa ka dibna Somaliland iyo Riyaaleba waxay noqdeen kuwa aad looga haybaysto .
Muranka ku saabsan qabsoomida doorashada goleyaasha deegaanka iyo baarlamaanka iyo qabsoomida/qabsoomid la'aanta doorashaduna , waa tijaabadii ugu horeysay ee siyaasadeed ee soo martay hogaaminta Madaxwayne Muuse,natiijada uga soo baxdaana waxay noqon doontaa mid qaabayn doonta waayihiisa siyaasadeed ee soo socda.
W/Q Axmednuur Guruje